GarsoorNews - Qormo Xog badan wadata oo laga Kooxda Qiyaano Qran
by Farah C/laahi | Wednesday, Dec 20, 2017 | 78 views
Ma ah in ay Xamar Waqooyiga Kuuriya noqoto, ma ah in 27 kadib oo qaran dhan oo ku burburay ama ‘ Afkaaga hayso, ama Afgooye aad” isla wadadii la qaadsiiyo.
Anigu waxaan ku jiray dadkii M. Farmaajo aad u taageersanaa, ee madaxweynihii ka horeeyayna ku dhaliisanaa in uu wax ka qaban waayay waajibaadkii loo doortay.
Farmaajo waxaan isla laha waa nin farsamo, hufnaan iyo karti hogaamiyi leh oo shacabka meesha bugta u xoqi kara una dhayi kara; sida, in Hanaaka cadaalada la hagaajiyo, xafiisyada dowladda iyo meelaha muhiimka ah in laga sifeeyo qaaqlayaasha nidaamka dowliga ah dulaystay, in amni la soo celiyo, in dadka wax galka ah ee dalka wax ka qaban kara meelaha xasaasiga iyo muhiimka lageeyo.
Hamigii aan lahaa waxaa badalay in dad u badan qaaqlayaashii aan rabay in la badlo iyo kuwa ka daranba laga safo meelaha muhiimka ah ee dalka.
Taasi isla markiiba waxay ii soo dadajisay in aan labo xaalo oo nafsi ah galo; waa mida 1aad’e in aan niyad jabo, waa mida 2aad’e in aan odoraso in aysan wax is badal ah soo socon.
In aan niyad jabay iyo aan odaraysay in aan waxba soo socon ma qarsnanin ee isla maalintii xukuumada la dhisba maqaal dheer oo ku saabsan qaab dhismeedka iyo aqoonta aan u leeyahay xubnaha wasiiradda ayaan soo qoray.
Markaad waxa diidaysid sabab ku diid, markaad wax ogalaanaysidna ku ogolow. Laakiin, hadii aadan xogbadan haynin oo aadan jikada siyaasadda iyo qaab fikireedka siyaasiyiinta iyo madaxda war ka haynin ama ay khibrad yaraan siyaasadeed ku hayso waxaa laga yaabaa in jilitaanka iyo filimaanta saxaafadda laga sii daynyo ku saameeyaan.
Qofka Tvga kilalka shanaad dhaantada iyo dirgaxda ka socota daawada waxaa laga yaaba in uu is dhaho ala yaa ku siiya lacag aad ugu dalxiis tagtid Jigjiga; laakiin, xaqiiqda Jigjiga ka jirta way ka duwantahay quruxda tvga.
Dad badan oo aan waxba kala soconin qaaciidooyinka siyaasadda waxay ku dhahayaan jaanis lama siinin M. Farmaajo, kuwana waxay ku dhahayaan waqti badan ayaa haray ee goormaa 11 bilood wax lagu qaban karay?
Jawaabto way sahlantahay; siyaasadda Jaanis la isma siiyo maxaa yeelay laacibiin badan oo ninba dan leeyahay ayaa rabaa in ay gacanta ku dhigaan taliska dalka. Tani ma ah wax soomaliya ku kooban ee was qaaciido guud oo siyaasadeed oo dunida ilaa maalintii siyaasado bilaabatay ka soo jirtay, jirna doonta.
Mida kale, siyaasado waa 100 maalin ee hore. Hadii aad si fiican isku qaabaysid oo inta burhaantaada aad looga cabsanyo aad wax isku aadsatid waad guulaystay, hadaad bariiqatana way kula go’day.
Hadda, anigan idan la hadlaya waxaan dad badan oo qoraalkan aqriyaya kala simanahay in la helo Soomaliya oo amni ah, qani ah, haybad leh. Laakiin waxaan kaaga duwanahay in kooxda hadda talada haysa dalkan ay samata bixin karaan aniga oo cuskanaya sababaha aan horay u soo sheegay.
Hadaba, hadaan kaa ra’yi duwnaado ha u qaadanin in madaxdeena qabiil ku diidanahay.
Halka qodob ee aan kuu soo jeedinayo wuxuu yahay filanka laguu shiday ee “Qaran dumis” iyo “dowladu shisheeye” ayaa lacag laga soo qaatay laxankiisa ha raacin ee bal si fiican wax u dhugo.
Waxaad is waydiisaa Qadar iyo Emaaraat maxaa u dhaxeeya? Waxaa is waydiisaa guurmay Itoobiyana saaxiib noqotay Sucuudi iyo Emaraadna cadow noqdeen?
Waxaad is waydiisa hadii aan kaa ra’yi duwaando oo aan iraahdo kooxda talada haysa say wax u wadaan sax ma ah ma la idilayaa, hantidayda iyo shaftaydana ma lagu tumanyaa?! Dalkan dhib iyo is nacayb intii hore ayaa ugu filan.
Hogaan fiican kali ah ayaa naga saari kara dhibka.
Muwaadin kabanka lagaraacayo laxankiisa ha raacin ee su’aalo is waydii.
Soomaliya ha noolaato.
W/Q Ahmed Abdihadi
Wariye, Falaqeeye siyaaasadeed.